मोबाइलमै चलचित्र हेर्न पाइएपछि सप्तरीका सिनेमाघर बन्द
सिरहा । सिडी, डिभिडी र मोबाइलमै चलचित्र हेर्न पाइने सुविधाका कारण सिरहामा सिनेमा घर बन्द हुन थालेका छन् । ग्रामीण भेगसम्म सिडी, डिभिडी र मोबाइलबाटै चलचित्रलगायत मनोरञ्जनका सामग्री हेर्न सकिने भएकाले एक दशकयता सप्तरीका प्रायःसबै सिनेमाघर बन्द भएका हुन् ।
लहानस्थित श्याम चलचित्र मन्दिरका सञ्चालक नीरज गुप्ताले भने, “बिस्तारै बिस्तारै सिनेमाप्रति सर्वसाधारणका चाहना घट्दै गएको छ । पहिलापहिला सिनेमा हलमा दर्शकको भीड हुन्थ्यो अहिले त विरलै हल भरिने गरेको छ ।” सर्वसाधारणको चलचित्रप्रति चाहना घट्दै गएकाले सिनेमाघर सञ्चालन गर्न समस्या भइरहेको गुनासो गर्दै उनले जोड दिए, “दर्शक कम भएपछि लगानीको अनुपातमा आम्दानी कम हुन्छ, लगानी बढी हुने भएकाले हल सञ्चालन गर्न कठिनाइ भइरहेको छ ।”
“बजारमा सस्तो मूल्यमै पाइने सिडी, डिभिडी र मोबाइलमा विभिन्न किसिमका फिल्म हेर्न पाइहाल्छ, अनि किन सिनेमा हेर्न सिनेमा हल जानुपर्यो” स्थानीयवासी सत्यनारायण चौधरी भन्छन्, “अब तीन घण्टासम्म सिनेमाघर बसेर सिनेमा हेर्नुपर्ने बाध्यता टरेर गएको छ । घरमै बसेर जतिखेर पनि इच्छा लागेको फिल्म हेर्न पाइहालिन्छ नि ।”
बजारमा तीन–चार हजारसम्ममा पाइने सिडी, डिभिडी भाडामा पाइने भएकाले सिनेमाघर जानुपर्ने बानी छुटिसकेको जानकारी दिँदै उनी बताउँछन्, “थोरै पैसामा सबै परिवार एकै ठाउँमा बसेर फिल्म पनि हेरिहालिन्छ, समयको पनि बचत हुन्छ, यसैले सिनेमा हलमा पुगेर सिनेमा हेर्ने बाध्यता अहिले छैन ।”
काठमाडौं । श्रीमद् भागवतमा कैयौं पौराणिक कथाहरु रहेका छन् । यसका साथै जीवनका कैयौं नीति तथा रीतिरीवाजहरु यसमा समावेश गरिएको छ । भगवान कृष्णले आफ्नो उपदेशमा यस्तै एक नीति बताएका छन् । कृष्णले यस्ता ६ क
मृत्युपछि के हुन्छ ? के हो दोस्रो दुनियाको वास्तविकता ?
काठमाडौं । के साँच्चै दोस्रो दुनियाँ हुन्छ ? दोस्रो दुनियाँमा पनि मान्छे बस्छन् ? हामी जुन जगतमा छौं, यसलाई भौतिक जगत भनिन्छ, तर यो वास्तविक भने होइन । यो ईश्वरको कल्पना हो । यसै अनुरुप ईश्वरको कल्पना